स्तनपान - विकिपिडिया
स्तनपान (Breast Feeding) आमाले शिशुलाई जन्म दिएपछि आफ्नो स्तनबाट निस्कने प्राकृतिक दूध चुसाउने क्रिया हो । गर्भधारणको प्रक्रियासँगै आमाको स्तनमा दूध बहन्न थालेको हुन्छ । पहिलो बिगौते दूध बच्चाको लागि अमृत समान हुन्छ, त्यसले बच्चालाई धेरै रोगहरूबाट लड्नसक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । स्तनपान र सघनतालाई परिवार नियोजनको माध्मको रूपमा पनि लिइन्छ । जति बढि पटक आमाले दूध चुसाउछिन् त्यतिनै बढि अस्थाइ बाँजोपानको अवधि बढेर जान्छ । यो कार्य ज्यादै पुरानो प्रचलन हुनुका सथै प्राकृतिक र स्वस्थकर पनि छ ।
आमाको दूध चुसिरहेको नवजात शिशु
अन्तरराष्ट्रिय स्तनपानको चिह्न
२ गलत धारणा
३ स्तनपानको फाइदा
४ स्तनपानलाई प्रोत्साहन
५ स्तनपान गराउने तरिका
६ आमालाई सल्लाह
७ स्तनपान गराउने आमाको आहारा
८ विशेष अवस्थाका नानीहरूलाई स्तनपान
९ परिवर्तनका लागि गर्न सकिने कामहरू
स्तनपान सबै स्तनधारी प्राणीहरूमा साधारण क्रिया हो । स्तनपान शिशुको लागि संरक्षण र संवर्धनको काम गर्दछ । नवजात शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुदैन । आमाको दूधबाट यो शक्ति शिशुलाई प्राप्त हुन्छ । आमाको दूधमा लेक्टोफोर्मिन नामक तत्व हुन्छ, जो बच्चाहरूको शरीरमामा फलाम तत्त्व दिन्छ फलाम तत्त्वको अभावमा शिशुको शरीरमा किटाणु प्रवेश गर्न पाउँदैनन् ।  आमाको दूध देखि आएका साधारण जीवाणु बच्चाहरूको शरीरमा उब्जने रोगसँग प्रतिरोध गरेर उनीहरूको रक्षा गर्दछन् । आमाको दूधमा रोगाणु नाशक तत्त्व हुन्छन् । वातावरण देखि आमाको शरीरमा पुगेको रोगाणु, शरीरमा स्थित विशेष भागको संपर्कमा आउछन्, जो उन रोगाणु-विशेषको बिरुद्ध प्रतिरोधात्मक तत्व बनाछन । यो तत्व एक विशेष नलिका थोरासिक डक्टबाट सीधा आमाको स्तन सम्म पुग्छन र दूधबाट बच्चाहरूको पेट मा । यस तरिकाले बच्चा आमाको दूध खाएर सदा स्वस्थ रहन्छ ।
केही शिशुलाई गाईको दूधले एलर्जी हुन सक्छ । यसको विपरीत आमाको दूध शत-प्रतिशत सुरक्षित छ । अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ कि स्तनपान गर्ने बच्चाहरू त्यस पछि अन्न खुवाउँदा पनि असुहाउँदो मोटो हुँदैनन् । यो शायद यस कारणबाट हुन्छ कि तिनीहरूलाई शुरू देखि नै आवश्यकता भन्दा अधिक खानाको बानी पर्दैन । स्तनपानबाट देखि जीवनका पछिको चरणहरूमा रक्त क्यान्सर, मधुमेह र उच्च रक्तचापको खतरा कम हुन्छ । स्तनपानले शिशुको बौद्धिक क्षमता पनि बृद्धि हुन्छ । यसको कारण यो हो कि स्तनपान गराउने आमा र उनको शिशुको बीच भावनात्मक सम्बन्ध धेरै मजबुत हुन्छ । यस वाहेक आमाको दूधमा धेरै प्रकारको प्राकृतिक रसायन पनि हुन्छन् । 
स्तनपान गराउने तरिकासम्पादन
स्तनपान गराउने आमाको आहारासम्पादन
विशेष अवस्थाका नानीहरूलाई स्तनपानसम्पादन
महिना नपुगी जन्मेको बच्चा : बच्चा बच्चालाई धेरै न्यानो चाहिन्छ । उसलाई न्यानो कपडाले बेरेर तपाईँको स्तनसँगै छातीमा राख्नुहोस् । कतिपय ठाउँमा यस तरिकालाई कङ्गारु हेरचाह' पनि भनिन्छ । कपडाभित्र आमा र बच्चाको छालाको स्पर्श हुनुपर्छ र दूध चुसाइरहनु पर्छ । राम्ररी दुध चुस्न नसके हातले निकालेको दूध खुवाउनु पर्छ ।
ओठ र तालु खुँडे भएको बच्चा : यस्ता बच्चाहरूलाई दुध चुस्नका लागि विशेष सहयोग चाहिन्छ । ओठभित्र मात्र धाजा फाटेको छ भने त उसले राम्रैसँग चुस्न सक्छ । (दुध खुवाउँदा ओठ फाटेको ठाउँमा आफ्नो हातको औंला राखिदिनुहोस् । तर तालु नै खुला छ भने दूध खुवाउँदा उसलाई सिधा पारेर राख्नुहोस् । यतिखेर तपाईँलाई विशेष सहयोग चाहिन सक्छ । बच्चाले स्तन च्यापेपछि आमाले हातैले दूध निचोरेर मुखमा झारिदिनुपर्छ ।
बच्चालाई अस्पताल लगेपछि पनि स्तनपान गराइराख्नुपर्छ । यदि तपाईँ - अस्पतालमा बस्न नसक्ने आमाले भने आफ्नो दूध निचोरेर भाँडामा वा पनर्जलीय तरल पदार्थ बोतलमा राखी खुवाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
परिवर्तनका लागि गर्न सकिने कामहरूसम्पादन
तपाईँ स्वयं आमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराएर कसरी स्तनपान गराउँदै पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनुहोस् ।
कामदारहरूलाई स्तनपानको महत्त्वबारे शिक्षा दिनुहोस् । महिलाहरूलाई उनीहरूका नानीलाई स्तनपान गराउने वा दूध निकाल्न सक्ने स्थान उपलव्ध गराउनुपर्छ ।
↑ १.० १.१ स्तनपान
↑ स्तनपान जरूरी छ।पत्रिका.कम
↑ स्तनपान भारत विकास गेटवे
विकिमिडिया कमन्समा स्तनपान सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"How Can Breast Not Be Best?" posting on NY Times Latitude blog, February १०, २०१२. Re: New Zealand controversy.
Breastfeeding support Photos and captions of celebrities promoting breastfeeding.
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=स्तनपान&oldid=1025675" बाट अनुप्रेषित